Ungayidweba njani i-rose kunye nepensile? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayidweba njani i-rose kunye nepensile?
Akunzima kangako ukuzoba i-rose nepensile. IRose yeyona ntyatyambo ixhaphakileyo.
Ukwenza oku, yenza oku kulandelayo.
I-E ingapeyintwa, umzekelo, ngokubomvu okuqaqambileyo.
IRose yintyatyambo entle kakhulu. Zoba i-rose ngale ndlela ilandelayo.
Szoba imijikelezo emibini kunye nesiqu sokuqhuma.
Siqala ukuzoba i-bud kunye namagqabi.
Sinqwala i-bud kunye namagqabi.
Yiza nayo yonke imigca ngepensile ethambileyo, yongeza izithunzi.
Masizame ukuzoba le ntyatyambo intle? Saqala. Ukuqala ngamathambo e-bud kunye nesiqu, ndicinga ukuba akuyi kuba nzima kakhulu
Okulandelayo, sigqiba igqabi leentyatyambo kunye nesiqu salo
Ewe, kwenzeka ntoni? Tsala isiseko seetafile kunye namagqabi
Ngoku zoba iipinki ze-rose
Ewe, yiyo loo nto, zoba ngamagqabi aqingqiweyo
Ukuba unqwenela, unokufakelwa imibala kwaye wonwabe ukuba kwenzeke kakuhle.
I-rose yentyatyambo entle kakhulu, iya kujongeka imnandi kulo naliphi na ikhadi, ukuze wenze i-rose
Ungazoba i-rose enjalo ngepensile ngokwamanqanaba:
Okokuqala sidweba intonga nge-spikes
Emva koko faka amagqabi amathathu
Zoba ezine zesine
Zoba i-rose yethu kwiinkcukacha ezingakumbi
Nanku umzekelo olula wokuzoba i-rose kunye nepensile:
Nantsi ke umsebenzi onzima kunokuba uzoba i-rose kunye nepensile. Nangona kunjalo, le rose iyamangalisa.
Unokubonakalisa i-rose yekhathuni ehlekisayo:
Nalu olunye uguqulelo olulula lomzobo wepensile:
Kodwa kule ndawo kukho iindlela ezininzi zevidiyo zemizobo.
Zoba i-rose kunye nepensile? Ukuze i-rose iphume ibe ntle kwaye ikhangeleke yendalo, kuya kufuneka ukhumbule indlela eyakhiwe ngayo, oko kukuthi, indlela iifreyiti ezikwi-bud. Umzekelo, sebenzisa ifoto ye-rose:
Akukho mntu unokubuxabisa ubuhle bentyatyambo le!
Kwaye ke siza kuqala ukuzoba iiroses ngepensile ngokwamanqanaba.
Okokuqala, zoba isakheko ngendlela yee-ovals kunye nesangqa, kwakhona uzobe imigca emi-2 ethe nkqo:
Ukusuka embindini wombindi we-ovval, qala ukuzoba i-bud:
Ngoku zoba ezi petals:
Qaphela ngononophelo kwaye uphinda iskimu somzobo:
Ukulandela umzobo, zoba isiqu kunye namagqabi:
Ewe, i-rose yethu isilungile. Thatha iipensile ezinemibala kwaye ufake umbala kwi-rose, ujonge umfanekiso ongasentla:
ngelishwa ndinomzobo wombala we-rose, esi sisiqalo sokuqala sokubonisa into kwisitayile semifanekiso ye-3D, ngepensile elula ayisebenzi ixesha elide. kukhangeleka ngathi kukuqhuma kune-Wise, nangona engakhange azizobe, kodwa uthathe icebo. Ndiza kuzama ukuchaza ngamazwi ukuba kanjani ukwenza irisithi. Okokuqala kufuneka uqaphele intyatyambo ephilayo. emva koko uqalise ukuzoba phakathi kwethanga elisontwe ngokuqinileyo. eyesibini ivulekile kancinci, eyesithathu iboniswe ngokugoba kancinci kwenxalenye ephezulu yesikhonkwane. ipalal nganye elandelayo yenziwa yabakhulu, ngokugoba kwayo ukusuka embindini kunye nokujika kancinci kumda. Senza iingcango zokugqibela zivuleke ngokupheleleyo, kunye neezithuba ezincinci, (kuba zivule kuqala kwaye zatyibilika kancinci))) emva koko sidweba isifi, isiqu, amasebe anamagqabi anameva kunye ...
Zininzi iindlela zokwenza i-rose kunye nepensile, ndiya kunika enye yazo:
okokuqala zoba isangqa, emva koko ukusuka kwiziko lazo ubambe i-petal petal kwaye xa intyatyambo sele ikulungile sazoba amagqabi ukuze sifake imibala.
I-rose ayisiyentyatyambo entle kakhulu, kodwa neyona intsonkothileyo - uninzi lwezilwanyana, olunye kolunye. Ukuzoba le ntyatyambo intle kunzima kancinci. Mna ngokwam bendisoloko ndinobunzima. Kodwa ukuba wenza le nyathelo ngenyathelo ngokulandelelana okuthile, ke yonke into iya kuphuma, ngaphezu koko, intle kakhulu. Ndiphakamisa iindlela ezimbalwa indlela yokuzoba i-rose ngokwamanqanaba:
Ukuzoba kakuhle i-rose kunye nepensile, akukho mfuneko yokuba ngumculi onobuchule. Kwi-Intanethi, kukho imiyalelo emininzi yevidiyo yokuzoba iiroses ngepensile. Ndazisa ezinye zazo. Ke ulungiselele ipensile elula ebukhali kwaye uhambe. Uya kuphumelela. Ngethamsanqa
IRose yintyatyambo entle nenomusa wonke umntu ayithandayo ukupeyinta. Ungayidweba ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa kwiimeko ezininzi yenziwa ngokulula kwaye ayithathi xesha lininzi. Umzekelo, unokuzoba i-rose enjalo.
Siqala ukuzoba kwi-ovval yeentyatyambo ngokwayo kwaye ngokuthe ngcembe ichwebise iipateni.
Nazi ezinye iindlela ezinomdla kunye ezilula kakhulu.
exhonyiweyo ubugcisa kunye nenkcubeko
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,389.